Inbound Marketing Checklist: 21 Atụmatụ maka Uto | Martech Zone
Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, anyị na-enweta ọtụtụ arịrịọ iji bipụta infographics na Martech Zone. Ọ bụ ya mere anyị ji ekekọrịta infographics kwa izu. Anyị na-elegharakwa arịrịọ anya mgbe anyị chọtara infographics nke gosipụtara naanị na ụlọ ọrụ ahụ etinyebeghị nnukwu ego iji wuo ihe ọmụma bara uru. Mgbe m pịrị gaa na ozi infographic a site n'aka Brian Downard, Co-guzobere ELIV8 Atụmatụ Azụmaahịa, Amatara m ha ebe ọ bụ na anyị ekekọrịta ọrụ ndị ọzọ ha meworo.
Ihe omuma a; Otú ọ dị, ọ dịghị ihe zuru okè! Brian na ndị otu ya bipụtara a ihe omuma ohuru na imezu onu ahia na ahia inbound nke bara uru, mara nma, ma nye onu ogugu iji kwado usoro obula. Brian na ndị otu ya na-enye ndị ọrụ azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa ọrụ.
Gịnị bụ Inbound Marketing?
Inbound marketing bu atumatu nke na-eji ọdịnaya eme ihe iji dọta atụmanya itinye aka na ntụgharị na ụlọ ọrụ na ntanetị. Companlọ ọrụ na-eji blọọgụ, pọdkastị, vidiyo, eBooks, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ ọcha, nchọta ihe ọkụkụ, ngwaahịa anụ ahụ, mgbasa ozi mgbasa ozi, yana nkwalite akwụ ụgwọ iji ruo ndị na-ege ntị dị mkpa.
Brian tinyere ihe omuma ihe omuma a nke na-enye inbound ahịa nyocha nke usoro uzo 21 iji dozie nke ga - eto eto ahia gi site na iji uzo ahia ahia.
Budata ndepụta ahịrị 94 dị ogologo
Etu ị ga - esi meziwanye Ulo azụmaahịa na Inbound Marketing
Mepụta Uru na ịde blọgụ - Ulo oru nke blog inweta 77% karịa okporo ụzọ na 97% njikọ ndị ọzọ karịa ndị na-adịghị.
Jiri Social Media ka Drivegbọala okporo ụzọ - 2.03 ijeri ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ nye ndi oru uzo ohuru di egwu ụgbọala ụgbọala na chọta ndi ahia ohuru.
Jiri SEO ka ịchọta ebe ịntanetị - 93% nke ahụmịhe n'ịntanetị malite na nchoputa # nchoputa. Mgbe ị na-ebuli saịtị gị na ọdịnaya gị nke ọma maka injin ọchụchọ, ị ga- dịkwuo gị ogo na nwetakwu okporo ụzọ.
Leverage Ndị Na-ege Ntị Ndị Ọzọ - Ulo oru di iche iche 6-to-1 laghachi mgbe ha nwere ike ịchọta ma tinye ndị dị mkpa na saịtị ndị ọzọ.
Mepụta Retargeting na PPC Online Ads - Ndị nleta a na - akpọgharị uche bụ 70% karịa iji tọghata na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Direct okporo ụzọ na Oku na-Action - 70% nke ulo oru enweghi oku oku kwesiri ekwenti n’ebe obibi ha.
Mepụta Uru na Enyemaka Afọ - Adịchaghị #content site na Ugboro atọ ka ọtụtụ ndị na-eduga dị ka ọdịbendị ọpụpụ ọdịnala na akwụ ụgwọ 62% na-erughị.
Tugharia ndi obia jiri akwukwo idebe - 56% nke weebụsaịtị niile pịa na-eduzi na peeji nke ime, ọbụghị peeji nke mbụ.
Jiri Optdị Ntinye-Aka iji Mbochie Mgbanwe - Ulo oru di iche iche nwere ike iputa ihe mụbaa ọnụego ntụgharị site na 1000% ma ọ bụ karịa!
Jiri Ihe Nlereanya Social iji mepụta ntụkwasị obi - Nyocha ndị ahịa nwere ike dịkwuo irè ahịa site na 54% n'ihi na 88% nke ndị mmadụ tụkwasịrị obi # nyocha site na ndị ahịa ndị ọzọ dịka ha tụkwasịrị obi na ndụmọdụ sitere na kọntaktị nkeonwe.
Jiri Njikọ Mmekọrịta Ndị Ahịa iji soro na-eduga - A CRM nwere ike mụbaa revenue site 41% kwa ahịa onye mgbe ejiri ya soro ma zụlite ndu.
Ziga ozi ịntanetị ka ị mechie ahịa ndị ọzọ - Ihe ọ bụla $ 1 nọrọ na ahịa email nwere nkezi nloghachi nke $ 44.25!
Melite Ahịa akpaaka - Akpaghị aka na ndu nurturing usoro site a 10% ma ọ bụ karịa abawanye in revenue naanị 6-9 ọnwa.
Mepụta Ọdịnaya Echebara Ahịa - 61% nke ndị mmadụ O yikarịrị ka ị ga-azụta n'aka ụlọ ọrụ na-anapụta #content.
Jiri nchịkọta iji chọta ọwa kachasị elu - +50% nke ulo oru esiri ya ike ekwu na ịre ahịa ozugbo na nsonaazụ ego.
Nwee Nkwado Ndị Ahịa Dị Egwu - 65% nke ndị ahịa na-ahapụ otu otu ogbenye ahịa ọrụ ahụmahụ!
Mepụta ikwu okwu na Social Media - 53% nke ndị mmadụ ndị na-agbaso ụdị na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eguzosi ike n'ihe nye ụdị ndị ahụ.
Kwụghachi ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe ụgwọ - Ọ na-efu 5 ugboro karịa iji nweta ndị ahịa ọhụrụ karịa ka ọ na-eme iji debe ndị dị ugbu a. Nke kpatara ya jiri dị mkpa na ị kwụghachi ndị ahịa gị na-eguzosi ike n'ihe ụgwọ iji mee ka ha laghachi azụ maka ihe ndị ọzọ.
Jiri Nhazi nkeonwe ka Mbanye Njikọ - Ulo oru ahia na-ahuta mmụba nke 20% na ahịa nwere ahụmịhe ahaziri iche na aro maka nye ndi ahia ọdịnaya na ngwaahịa ha choro.
Jiri Ngwaọrụ Nyocha & Nzaghachi - Ọ na-ewe 12 ezigbo ahụmịhe ndị ahịa imezu naanị 1 adịghị mma ahụmahụ. Nakọta nzaghachi ga-enyere aka kpochapu ohere nke ahụmịhe ndị ahịa na-adịghị mma.
Anakọta Nyocha & Akaebe - Nnyocha gosiri na70% nke ndi ahia lee ngwaahịa # nyocha tupu ịzụrụ. Kingjụ ndị ahịa maka nyocha na oge kwesịrị ekwesị, ga-emepụta ndị na-akwado akara na na-adọta ndị mmadụ ọhụrụ.
Tags: Analyticsndị na-ege ntịịde blọgụBrian Downardkpọọ ka emekpọọ n’ọrụọwandepụta ndepụtanyochamgbanweụlọ ọrụ ịde blọgụntụkwasị obiCRMctaezi ndị ahịanjikwa mmekọrịta ndị ahịaahịa nkwadoELIV8email Marketingngwa nzaghachiinbound marketinginbound ahịa nyochaọdịda peeji nke mgbanwembido peeji nkendị ahịa na-eguzosi ike n'iheakụrụngwa ahịa-enyeụdị opt-inkeonweNyochaahịa lekwasịrị anya ọdịnayaAelekọta mmadụ mediankwado mmadụnyochatestimonials
Ọkt 28, 2015 na 1:00 PM
Naanị ịchọrọ ịkele gị ọzọ maka ịkekọrịta na okwu ọma!
Ọkt 28, 2015 na 2:05 PM
Ihe niile kwesiri, Brian!
Nov 5, 2015 na 4:16 AM
Ga-arịba ndepụta ndepụta a. Thx otutu
Nov 5, 2015 na 3:14 PM
Olileanya na ọ na-enyere!
Nke ahụ bụ nnukwu ndepụta ahịa inbound kesara.